Hay?adda xuquuqda Aadanaha oo bogaadin iyo cambaareyn is huwan u dirtay Al-shabaab. – Radio Daljir
Hay?adda xuquuqda Aadanaha oo bogaadin iyo cambaareyn is huwan u dirtay Al-shabaab.
Nayrobi, Apr ? 19 Hay?adda Human Right?s Wacht ee Q,M u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in xarakada Shabaab Al-mujaahidiin ay nabad ka dhaliyeen goobaha ay gacanta ku hayeen ee Somaliya, laakiin ay tacdiyo ba?an ka geysteen goobahaasi ay maamulaan.
Warbixintan oo kasoo xafiiska hay?addaasi ee nayroobi kana kooban 62 bog ayaa sheegaysa in shabaabku ay gabi?ahaanba ka takhalluseen burcaddii dadka dhici jirtay iyo malleeshiyooyinkii is kood u abaabulnaa ee mudada ka jiray Somaliya ayna dadku hadda haystaan nabadgalyo.
Laakiin taasi badalkeeda shabaabku waxay geysteen dhibaatooyin aan la aqbali Karin sida inay dadka ka jaraan lugaha iyo gacmaha, in dhagax lagu dilo iyo inay haweenka ku khasbaan dhar aan sharci aheyn oo aysan awoodin ayaa lagu yiri warbixinta.
Hay?adda xuquuqul insaanka u qaabilsan Q,M ayaa sheegtay inay wareysiyo ay ka qaaday ku dhawaad 80 qof oo ka soo qaxay Somaliya ayna xogtani tahay mid fadhida, laakiin Al-shabaab ayaa sheegaysa inaysan sameyn waxaan ka aheyn in dalka lagu maamulo shareecada islaamka ayna taasi tahay mideysan cidna ka idansaneyn inkastoo aysan wali ka jawaabin eedeyntaan cusub.